Global Voices teny Malagasy » Mihemotra Ny Fahalalahan’ny Aterineto Ao Rosia, Ao Okraina, Mihatsara Kosa Ao Belarosia · Global Voices teny Malagasy » Print
Mihemotra Ny Fahalalahan'ny Aterineto Ao Rosia, Ao Okraina, Mihatsara Kosa Ao Belarosia
Voadika ny 30 Novambra 2016 7:00 GMT 1	 · Mpanoratra Jack Margolin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Belarosia, Kazakhstan, Okraina, Ozbekistan, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Praiminisitra Rosiana Dmitry Medvedev. Sary: Wikimedia Commons
Navoaka tamin'ity volana ity ny tatitra isan-taona fanaon'ny “Fahalalahan'ny Aterineto” ao amin'ny Tranon'ny Fahalalahana, mampiseho sary mampiahiahy misy ny fitotonganan'ny fahalalahan'ny aterineto ao amin'ny faritra miteny Rosiana manerana izao tontolo izao. Nosokajiana “malalaka amin'ny ampahany” i Rosia, Belarosia sy ny fanjakana Azia Afovoany, anisan'izany i Kazakhstan sy Ozbekistan. Ànkoatra an'i Bélarosia, hita ao anatin'ny filaharan'ny tatitra nanomboka ny taona lasa ireo firenena rehetra ireo.
Mifototra amin'ny dingana fanomezan-daharana avy amin'ny mason-tsivana fanombanana ny tatitra, anisan'izany ny sakana amin'ny fidirana amin'ny tahiry, ny famerana ny votoaty antserasera sy ny fandikan-dalàna voatatitra momba ny zon'ny mpiserasera.
Ny fihemoran-daharan’ i Rosia dia vokatry ny fampidirana lalàna vaovao mametra ny zon'ny mpiserasera aterineto, anisan'izany ny fonosana lalàna fantatra amin'ny hoe “Lalàna Yarovaya ,” izay mamaritra ny fahalalahan'ny aterineto mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana. Ny lalàna Yarovaya dia mitaky amin'ireo mpikirakira ny fifandraisan-davitra mba hanome varavarana ambadika fidirana ho an'ny manampahefana ary mampiditra famerana amin'ny hetsika ara-pivavahana  an'ireo finoana sasany. Amin'ny fampitomboana ny sazy ambony indrindra noho ny «fanamarinana» ny fampihorohoroana antserasera, nametraka hetsika ara-dalàna mahery setra kokoa manohitra ireo mpiserasera media sosialy ny lalàna. Nanamarika ihany koa ny Tranon'ny Fahalalahana fa iharan'ny fanafihana antserasera sy ny herisetra ara-batana hatrany ireo mpikatroka antserasera.
Raha manana taha ambony amin'ny fidirana amin'ny aterineto i Rosia, naneho ny ahiahin'izy ireo amin'ny fanjakazakan'ny mpamatsy tolotra aterineto an'ny fanjakana, Rostelecom, eo amin'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra ny Freedom House [Lapan'ny Fahalalahana] sy ny mpanaramaso hafa. Saingy tsy tena hita ho zavatra ratsy ao Rosia ny fifehezan'ny fanjakana ny aterineto. Araka ny fakàna ny hevitry ny vahoaka notontosain'ny foibe Levada ao Moskoa tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nilaza ny 60 isanjaton'ireo namaly fa ilaina ny sivana aterineto ao Rosia.
Misy ifandraisany amin'ny hetsika manodidina ny Ady ao Donbas ny fihemoran'i Okraina tamin'ny filaharana amin'ny Fahalalahan'ny aterineto. Tahaka ny ao Rosia, nanao famoretana  tamin'ireo fanehoan-kevitra “mahery fihetsika” antserasera, izay matetika mifandray amin'ny tsikera momba ny anjara asan'i Kiev amin'ny ady na manohana ny separatista tohanan'ny Rosiana ao atsinanana ny manampahefana Okraniana. Nirotsaka tamin'ny ezaka mifamaly amin'izany ny manampahefana ao amin'ny repoblika separatista Donetsk sy Luhansk ao atsinanan'i Okraina, amin'ny fikasana hanakana ireo votoaty mifandraika amin'ny kolontsaina Okrainiana na manohana ny ezak'i Kiev amin'ny ady.
Notarihan'ireo mpiantsehatra tsy ara-panjakana ny ezaka sasany: tany am-piandohan'ity taona ity, namoaka  ny mombamomba manokana an'ireo mpanao gazety an'arivony mitatitra ny ady ao atsinanana ireo nasionalista Okrainiana.
#Ukraine  has fallen 11 spots on the Internet freedom ranking index since 2012. pic.twitter.com/T809v7kqRQ 
— RFE/RL (@RFERL) November 20, 2016 
Very toerana 11 teo amin'ny laharana amin'ny fahalalahan'ny aterineto i Okraina hatramin'ny taona 2012
Tsara kokoa, nampiasa tranonkala toy ny sehatra hiadiana amin'ny vaovao diso aelin'i Kremlin sy handrindrana ny fisantaran'andraikitry ny fiarahamonim-pirenena ny mpikatroka.
Nitombo ny fahalalahan'ny aterineto ao Belarosia, na dia mbola sokajiana ho “tsy malalaka” aza ny firenena. Nitombo ny fidirana sy ny hafainganam-pandehan'ny aterineto ao amin'ny firenena, miteraka fihatsarana amin'ny fisian'ny media antserasera sy ny tati-baovao amin'ny media sosialy amin'ny tranga ara-politika.
Na izany aza, mbola manohintohina ny fahalalahana miteny ao amin'ny tranonkala ao Belarosia ny politika manasazy. Lasibatry ny manampahefana hatrany ny mpanao gazety, ny bilaogera ary ny mpiserasera aterineto amin'ny ankapobeny. Nanamafy ny fahafahan'ny fanjakana Belarosiana hanaramaso sy hanenjika ireo mpiserasera ny fampidirana lalàna vaovao sy fepetra ara-teknika vao haingana. takiana amin'ireo mpamatsy tolotra aterineto ny fitehirizana ny torohay amin'ny dian-tserasera an'aterineto nandritra ny herintaona, ary nampiasaina nanomboka tamin'ny taona 2011 ny teknolojia deep packet inspection (DPI) na fonosana fanarahamaso lalina mba hanivanana votoaty. Tahaka ny ao Rosia, mampiasa rindrambaiko mpitsikilo mba hanarahamaso ny vahoakany antserasera ny fanjakana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/30/92745/
 Lalàna Yarovaya: https://meduza.io/en/feature/2016/06/24/russia-s-state-duma-just-approved-some-of-the-most-repressive-laws-in-post-soviet-history
 varavarana ambadika fidirana ho an'ny manampahefana : https://www.eff.org/deeplinks/2016/07/russia-asks-impossible-its-new-surveillance-laws
 hetsika ara-pivavahana: http://www.rferl.org/a/russia-yarovaya-law-religious-freedom-restrictions/27852531.html
 fidirana amin'ny aterineto : http://www.internetlivestats.com/internet-users/russia/
 60 isanjaton'ireo : http://www.levada.ru/2016/11/18/doverie-smi-i-tsenzura/
 nanao famoretana: https://globalvoices.org/2015/02/09/ukraine-journalist-treason-mobilization/
 November 20, 2016: https://twitter.com/RFERL/status/800217244873564160